Maanta waxaan ka hadlaynaa isbeddel, hal-abuur iyo korsasho. – Get up to 50% off when you buy multiple small stickers.
Maanta waxaan ka hadlaynaa isbeddel, hal-abuur iyo korsasho.
Markii uu tv-ga midabka ka soo baxay Talyaaniga 1970-meeyadii, maamulka maxalliga ah ayaa buriyay inta badan TV-yada iyaga oo sheeganaya in aysan sameynin baaritaan ku filan iyo in ay waxyeello u geysan karaan daawadayaasha. Waxaa laga yaabaa inay sax ahaayeen, malaha. Arrintu waxay ahayd in ay ahayd tignoolajiyada qaska ah ee dawladdu isku dayday in ay nidaamiso sababtoo ah ma ay fahmin.
Tusaale kale waa internetka.
Marka hore waxaa loo tixgeliyey “fad gudub ah” , ka dibna si weyn u qaatay qof kasta oo wata casriga ama laptop-ka ereyga oo dhan.
Waxaan xasuustaa Bill Gates oo waraysi ku saabsan David Letterman Show lagu maaweelinayey sababtoo ah waxa uu sharaxayay waxa internetku yahay iyo sida uu u bedeli doono aduunka.
Bill: “[Internetka] waxa uu noqonayaa meel ay dadku ku daabacan karaan macluumaadka, dirista emails elegtarooniga ah…”
Waraysiye: “Laba bilood ka hor waxaa jiray ogeysiis weyn oo ku saabsan in internet-ka […] inay baahin doonaan ciyaarta kubbadda koleyga. “…..
Bill: “Waxaad dhagaysan kartaa mar kasta oo aad rabto”
Waraysiye: “Cajaladuhu ma garaacaan gambaleelka?”
… iyo wixii la mid ah. Run ahaantii xanuun bay ahayd in la daawado, laakiin Bill wuu qoslay. Ma isaga la, laakiin isaga.
Waad og tahay meesha aan ula socdo kan, laakiin waxaan rabaa inaan caddeeyo.
Waxaan si is-hoosaysiin ah u aaminsanahay in mar kasta oo ay jiraan hal-abuuro waaweyn oo ku lug leh, dadku way cabsanayaan.
Dadku waxay isku dayi doonaan inay difaacaan xaaladda hadda jirta sababtoo ah “isbeddel” ayaa cabsi gelisa dadka. Beddelka shaqooyinka, beddelka guryaha, beddelka lammaaneyaasha (lol) waa dareen cabsi leh sababtoo ah waxaa naloo qorsheeyay inaan raadinno ammaan oo aan joogno aagga raaxada.
Haddii awoowayaasheen ay heleen god wanaagsan, oo leh ilo badan oo cunto ah, uma baahna inay “ka baxaan aagga raaxada” oo ay la dagaalamaan libaaxyada qaarkood si ay u hubiyaan cuntadooda xigta.
Isbeddelku waa cabsi, tignoolajiyadanna way adag tahay in la fahmo. Dadka qaarkood waxay isku dayayaan inay fahmaan, laakiin run ahaantii way adag tahay sida cadaabta. Waxa aan booskan joogay sanado badan walina waxaan baranayaa waxyaabo cusub maalin kasta.
Hababka cusub ee la isku raacsan yahay, noocyada kala duwan ee blockchain, ansaxayaasha, ergada, macdan qodayaasha, waxay leeyihiin qiime, dhiirigelin, oracles, iwm. Inta badan oo aad barato wax badan oo aad rabto inaad barato iyo in badan oo aad ogaato inay jiraan wax badan oo la baranayo.
Tani waa in la sheego in dadka intooda badani ay iska cadayaan sababtoo ah ma rabaan inay isticmaalaan awoodda maskaxda si ay u fahmaan.
Aan si toos ah u helo tan: gabi ahaanba waa OK in aadan rabin in aad barato. Ma garanayo sida iimayllada u shaqeeyaan haddana waxaan isticmaalaa maalin kasta.
Ma garanayo sida internetku run ahaantii u shaqeeyo, haddana, mar kale, waxaan isticmaalaa maalin kasta.
Waxa la mid ah wicitaanada telefoonka, fariimaha qoraalka ah, TV-yada, iwm.
Taasi waxay tidhi, waxay qaadataa waqti in la qabsado tignoolajiyada cusub waana sababta ay dadku u naxaan.
Dadka intooda badan kaliya way iska cadaynayaan sababtoo ah ma jecla waxaysan fahmin, ilaa ay ogaadaan in ay bilaabi karaan isticmaalka tignoolajiyada iyaga oo aan si dhab ah u ogeyn waxa ka dambeeya.
Waxaan aaminsanahay inaan weli nahay xilli hore. Maanta oo kale aad bay ugu adag tahay isticmaaleha celceliska ah inuu dejiyo jeebka, qor jumlada abuurka, ka qayb qaadashada borotokoolka maaliyadeed ee baahsan, $AAVE , Uniswap, Pancakeswap, Curve, ka dib helitaanka bixiyaha saxda ah, ka dibna u dira calaamado u dhexeeya boorsooyinka iwm.
Sida ay hadda tahay ma aha in ay soo jiidato balaayiin dad ah, tani waa wax fiican. Waa wax fiican sababtoo ah marka shirkaduhu bilaabaan inay diiradda saaraan xudunta macaamiisha iyo khibradda, qof kastaa wuxuu rabi doonaa inuu qayb ka noqdo.
Shirkado cusub ayaa ku dhalan doona blockchain, adeegyo cusub ayaa la bixin doonaa. Web3 waa wax walba oo ku saabsan ka wareejinta awoodda shirkadaha waaweyn ee isticmaala waxayna ku dhacdaa si sax ah indhahayaga hortooda.
$ BTC iyo $ ETH maaha maalgashi 1 sano ah. Farsamooyinkani waxay bedeli doonaan aduunka sidaan ognahay waxayna ka heli doonaan iska caabin ka yimaada isla dadkaas kuwaas oo ka faa’iideysanaya adduunka sicir-bararka ku salaysan.
Waxaan diyaar u ahay inaan ka ganacsado oo aan maalgashado crypto-ka kor ku xusan tobanka sano ee soo socda iyo suurtogalnimada xitaa wixii ka dambeeya.
Iyada oo waxaas oo dhan la sheegayo, ma aha crypto kasta isku mid, sida kayd kastaa isku mid ma aha.
Isbarbardhigga BTC iyo TurtleCoin waa sida isbarbardhigga $ TSLA (Tesla Motors, Inc.) (Tesla Motors, Inc.) iyo Theranos. Oo waxaa jirta sabab uu Theranos uusan u haysan calaamad.
Ku rakiban 3-Lakab, Koofiyadda Aabaha, Maska Miis, Maaskarada Carruurta, Magnet, Koofida Baseball, suufka Mouse, Mat Eyga, Bandana Xayawaanka ah, Bustaha Xayawaanka, Maqaayad Bisad, Funaanad Firfircoon, Kubadda Kolay , Shaadhka sawir gacmeedka, Hoodie-ga fudud, shaadhka dhididka fudud, funaanad gacmo dheer, funaanad dheer, funaanad Premium, Hoodie jiidi, shaadhka jiidista, Taangiga Racerback Korka, Korka gacmo la’aanta, shaadhka muhiimka ah, shaadhka sare, Tri Funaanad isku dhafan, shaadhka V-Neck, Hoodie zipped, Dharka A-line, Chiffon Sare, Funaanad Iskoob rakiban, Shaadh xidhan, Shaadh V-Qoor ku rakiban, Dhar shaadh garaaf ah, lugo , Mini Skirt, Funaanad Qaado Premium ah, Funaanad Fiican Dabacsan, Istiikaro, Istiikaad dhalaalaysa, Maqaarka Laptop-ka, Gacanka Laptop-ka, Istiikarada Daah-furnaanta, Maqaarka iPadka, Kaska Snap iPad Kiis, iPhone jeebka, Samsung Galaxy Skin, Samsung Galaxy Snap Case, Samsung Galaxy Soft Case, Samsung Galaxy Tough Case, Daabacaadda Guddiga Farshaxanka, Daabacaadda Farshaxanka, Daabacaadda Canvas
Tags: AEDAfgaanistaan ​​AfgaanistaanAFNAlbanian LekALLaltcoinaltcoinsAMDANGAngolan KwanzaAOAArgentine PesoArmenian DramARSAruban FlorinAsarbayjani ManatAUDAWGAZNbaayacmushtarkaBahrain DiinaarBalboa panamàBAMBangladeshi TakaBBDBCHBDTBelize DollarBGNBHDBhutanese NgultrumBIFBinance USDBirr ItoobiyabitcoinBitcoin CashblockchainBMDBNDBOBBolivian BolivianoBosnia-Herzegovina Convertible MarkBotswanan PulaBrazilian RealBRLBrunei DollarBSDbtcBTNBulgarian LevBurundi FrancBUSDBWPBYNBZDCADCambodian RielCape Verdean EscudoCDFCFA Franc BCEAOCFA Franc BEACCFP FrancCHFChilean PesoChilean Unit of Account (UF)Circle USD CoinCLFCLPCNYCOPCosta Rican ColónCRCcryptocryptocurrencycryptocurrency. scryptopunksCuban PesoCUPcurrencyCVECzech KorunaCZKDAIDalasi gambiàDanish KroneDenar MacedonianDiinaar AlgerianDiinaar JordanDiinaar LiibiyaDiinaar SerbianDiinaar TunisiaDiinaarka CiraaqDiinaarka KuwaitiDirham MoroccoDJFDjiboutian FrancDKKDOGEdogecoinDollar BahamianDollar BarbadianDollar BermudanDollar CanadianDollar Caribbean BariDollar Islands CaymanDollar JamaicaDollar LiberiaDollar NamibiaDollar New ZealandDollar Taiwan cusubDollar ZimbabweDominican PesoDoolarka AustraliaDoolarka FijianDoolarka GuyanaDoolarka Solomon IslandsDoolarka SurinameseDOPDuubtay BTCDZDEGPETBethetherethereumEUREurozone EuroFaran KomorianFaran KongoFaran RwandaFaran SwissFJDFKPForint HungarianganacsigaGBPGELGemini US DollarGeorgian LariGhanaian CediGHSGibraltar PoundGIPGMDGNFGold (troy ounce)GTQGuatemala QuetzalGuinean FrancGUSDGYDHaitian GourdeHKDHNLhodlHonduras LempiraHong Kong DollarHRKHryvnia YukreeniyaanHTGHUFIDRILSINRIQDIRRISKJEPJersey PoundJMDJODJPYKazakhstani TengeKESKGSKHRKMFKoonfur KuuriyaKPWKróna IcelandicKrone NorwegianKroon SwedishKRWKuna CroatianKwacha ZambianKWDKYDKyrgystan SomKZTlacaglacag caddaan ahlacagta cryptoLAKLaotian KipLBPLesot ho LotiLira TurkishlitecoinLKRLRDLSLltclydmaalgelintaMacanese PatacamacdantaMADMalagasy AriaryMalawian KwachaMalaysiya RinggitMaldivian RufiyaaMasar Poundmatoorada teslaMauritanian OuguiyaMauritian RupeeMDLMDL PesoMetical MozambiqueMGAMKDMMKMNTMoldovan LeuMongolian TugrikMOPMRUMURMVRMWKMXNMyanma KyatMYRMZNNADNaira NigeriaNederland Antillean GuildernerdNGNNicaraguan CórdobaNIONOKNPRNZDOMRPABPapua New Guinean KinaParaguay GuaraniPAXPaxos Standard USDPENPeruvian Nuevo SolPeso ColombianPeso UruguayPGKPhilippine PesoPHPPKRPLNPound Islands FalklandPound LubnaanPound SterlingPound SudanPound SuuriyaPYGqadaadiicQARRand Koonfur AfrikarippleRipple QatariRiyaalka CumaanRiyaalka IranRiyaalka YemenRomanian LeuRONRSDRUBRuble BelarusRuble RuushRupee NepaleseRupi PakistaniRupiah HindidaRupiah IndonesianRWFSaint Helena PoundSalvadoran ColónSamoan TalaSão Tomé iyo Principe Do brasarsatoshisatoshi nakamotoSaudi RiyalSBDSCRSDGSEKSeychelles rupeeSGDSheqelka IsraelSHIBShiba InuShiinaha YuanShilin SoomaaliShilin TansaaniyaShilinka KenyaShilinka UgandaSHPSierra LeoneanSilver (troy ounce)Singapore DollarSLLSOSSRDSri Lankan RupeeSTNSVCSwazi LilangeniSYPSZLTajikistani SomoniteslaThai BahtTHBTJSTMTTNDTongan Pa?angaTOPTrinidad and Tobago DollarTRYTTDTurkmenistani ManatTWDTZSUAE DirhamUAHUGXUS DollarUSDUSDCUYUUzbekistan SomUZSVanuatu VatuVenezuelan Bolívar SoberanoVESVietnamese DongVNDVUVWBTCWoqooyiga KuuriyaWSTXAFXAGXAUXCDXOFXPFxrpYen JapaneseYERZARZloty PolishZMWZWL
June 12, 2022 by admin Somalia - Soomaaliya 0
צמד פיצוצים פגע בעיר ביירות
චිත්තවේග චුම්බක රෝදය “එය ගයන්න.”
Next Hoy estamos hablando de cambio, innovación y adopción.
Previous Danes govorimo o spremembah, inovacijah in sprejemanju.